Dowladda Soomaaliya oo Muwaadin Soomaaliyeed u Dhiibtay Dalshisheeye - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo Muwaadin Soomaaliyeed u Dhiibtay Dalshisheeye
January 23, 2020 (Awdinle Online) – Warar hadda nasoo gaarey laguna faafiyey Warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa sheegey in Amal Nuur Cismaan oo ka maqneyd reerkooda in mudo la helay maanta, loona dhoofiyey dalkii ay dhalashadiisa heysatay ee Denmark.
Wararka ayaa sheegey in dhoofinta Amal ay gacan weyn ka geysatey Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaa Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, luga dhoofiyey Warqadaha aan rasmiga aheyn ee lagu safro oo loo yaqaani Travel Documents oo laga soo sameeyey Safaarada Denmark ee keynya ku taala magaaladda Nairobi.
Amal Hooyadeed oo lagu magacaabo Amran Xalane ayaa todobaad ka hor warbaahinta u sheegtey in Gabadheeda lagu heysto Xaruunta Madaxtooyadda Dalka ee Villa Somalia, waxayna codsatey in gabadheeda loo soo daayo laguna soo wareejiyo.
Waa markii labaad oo dowladda federaalka ah ay ku kacdo arintan oo hale, waxaa hore dowladda itoobiyo loogu gacan geliyey Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi-dhagax oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u dirir ahaa.
Isla sidaan oo kale ayey Taliyihii Hay’adda Sirdoonka Qaran ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Sanbaloolshe wuxuu sheegay in Qalbi-dhagax uu u dhoofey dalkiisa Itoobiya, sidoo kale Taliyaha Booliska Dowlada Federaalka ee Soomaaliya Jeneraal Xijaar ayaa waxaa uu sheegay in Amal ay dhooftey Dalkeed Denmark.
Previous articleSoomaaliya oo Dooneysa inay soo qaado Haweenka Soomaalida ah ee ka tirsanaa Daacish ee ku Sugaan Suuriya
Next articleHay’adda Save the Children Mogadishu Waxaa Ka Banaan Shaqo “Nutrition Officer”